कोरोना ह्वात्तै बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो चेतावनी - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाको अवस्था खराब भएको बताएको छ ।
शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोनाको अवस्था खराब भएको र सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।
नेपालमा एकैदिन हालसम्मकै बढी २ हजार २० जना संक्रमित थपिएकै दिन प्रवक्ता गौतमले घनाबस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा भिडभाड, नारा जुलुस नगर्न चेतावनी दिएका छन् । आज काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८५९ संक्रमित थपिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (सूचीसहित)
‘मैले दुई महिनाअघि भनेको थिए, भिडभाड, नारा जुलुस नगर्नुस् । त्यसले तपाईलाई खास्सै केही हुँदैछ घरमा अरुलाई सार्नुहुन्छ भने । जुन कुरा गलत होस् भन्ने सोचेको थियो, त्यो कुरा अहिले आएर सही ठहरियो’, उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘अब पनि फेरि काठमाडौंलगायतका घनाबस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा भिडभाड, नाराजुलसु गर्न थालिएको छ । त्यो तुरुन्तै बन्द गर्नुस् ।’
याे पनि पढ्नुस अख्तियारका १५ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
उनले घनाबस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा भिडभाड, नारा जुलसु गर्न नरोकिए ठूलो क्षति हुने चेतावनी दिए । गौतमले ६० वर्ष पुगेका, श्वासप्रश्वास, क्यान्सर, फोक्साका बिरामी, नियमित डायलासिस गराइरहेका अन्य रोगबाट गस्रित नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरे ।
उनले सुझाव दिँदै भने, ‘अत्यन्त जरुरी काम नपरी ननिस्कनुहोस् । निस्केनै परे मास्क लगाउनुस् । दुई मिटरको दुरी कायम राख्नुस् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुस् । साबुन पानी हात धुनुस् वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुस् ।’
याे पनि पढ्नुस कोरोनाले काभ्रेमा थप एकको मृत्यु
कञ्चनपुरमा आमाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ